Habibiana Tsotra Izao No Azo Ilazana ny Tantaran’ny Fihazàn’ny Mpanjaka Tao Amin’ireo Lemaka Atsimon’i Nepal · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Janoary 2016 6:43 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Français, русский, عربي, नेपाली, Ελληνικά, English
Navadika ho valan-javaboahary ankehitriny, tany lonaka natao ho fihazana ilay faritra tany aloha tany. Nampiasain’ireo mpitondra Nepali Rana sy ireo vahininy ho toy ny toerana fihazan'ny mpanjaka sy ireo vahiny nandritra ny taona 1846 hatramin'ny 1951 ny Chitwan National Park ankehitriny .
Lasa miparitaka be ety anaty aterineto ireo vondron-tsary ara-tantara mampiseho ireo sary mahatezitra ahitàna ireo mpitondra Britanika sy Nepale manao fihazàna mandatsa-drà amin'ireo biby marobe, ka anisan'izany ireo tigra, bera ary ireo “rhinoceros”.
Ny volana Febroary 1876 A.D, tonga mba hihaza tao Banbassa, andrefan'i Nepal, i Albert Edward Printsin'i Wales (Mpanjaka Edward VII taty aoriana), zanaka lahin'ny Mpanjakavavy Victoria, nampiantranoin'ny Praiminisitra Jung Bahadur Rana, ary tamin'izany dia nahatifitra tigra 23 nandritra ny tapa-bolana. Efa niahy an'i Delhi Durbar izy nandritra ny fankalazana ny fanosorana ho mpanjaka Victoria reniny ho Amperoran'i India ny 1 Janoary 1876 A.D. Voasoratra fa tena nahasorena ireo fombafombam-panjakana hoe ny fahatongavany hitifitifitra tany Terai no zava-nisondagina tamin'ny dia nataony tany India.
Na izany aza, ny tena fandehanana nihaza niharo habibiana sy nahatsiravina indrindra dia izay nataon'ny Mpanjaka George V nivahiny tao Nepal taorian'ny nisalorany ny maha-Amperoran'i India azy ny taona 1911.
Ny fihazàn'ny mpanjaka ny Tigra sy ireo “Rhinoceros” tao amin'ny Terai Nepaley ny taona 1911 izay nataon'i Kees Rookmaaker, Barbara Nelson ary Darrel Dorrington no manome antsipirihany momba ilay fihazàna mampihoron-koditra.
Voarakitra ao anatin'ireo sary 50 isa avy amin'ny boky firaiketan-tsary natolotry ny Anjerimanontolom-pirenen'i Aostralia ny fihazàna fanaon'ny mpanjaka. Ny trano tranomboky ANU no nanolotra ny maribolana tamin'ireo sary.
Ny lahatsoratra Ny Tifitry ny Mpanjaka Imperialy tao Terai Nepal, ny Desambra 1911 mamaritra ilay fihazàna amin'ny hoe :